Batman dia slot lalao izay efa miorina amin'ny malaza Gotham City; dia manana lafin-javatra isan-karazany hafa izay mitandrina ny mpilalao voly. Get ho mampientam-po izany dia amin'ny toetra amam-panahy manam-pahaizana ary aoka ny Dark Knight mampahazava ny harena. Tena tsara tarehy slot lalao izay azo nilalao tamin'ny takelaka, finday, Desktops sy ny maro hafa. Raha efa namaky ny boky an-tsary ary nahafinaritra izany dia Azo antoka fa mankafy io loha hevitra mifototra maizina slot lalao.
Toy ny anaran 'ny slot soso-kevitra, slot lalao ity, izay mifototra amin'ny iray amin'ireo tena tia superheroes eto mba hanome mpilalao mahafinaritra payouts. Ny slot efa natao amin'ny maizina, orana alina, ny foto-kevitra rehetra ny maizina dia be avy mandresy ny lalanao. Mandehana mialoha ary milalao ity lalao mahafinaritra slot ka jereo izay manana ho anao.
More amin'ny developer ny Batman
Batman slots no novokarin'ny Nextgen lalao izay iray amin'ireo lalao mpandraharaha ambony ao amin'ny orinasa iGaming. Izy ireo ny mpisava lalana iray, ary mamorona Casino lalao izay entin'ny kalitao, miara-miasa izy ireo mba hanangana ny tsara indrindra ho an'ny mpilalao ho tia. Izy ireo manohy ny asany sy hamonjy ny lalao Casino mitondra zava-baovao miavaka amin'ny famoronana.
Batman slot manana 5 reels ary 50 paylines; ny vola madinika ny habeny tandavan-in eo 0.01-1.00 ary ny mpilalao dia afaka tsindrio ny bokotra indray mandeha ny kofehy ireny ny loka efa napetraka. Isaky ny mpilalao tany mifanaraka marika taorian'ny rehetra namoly, ny mpilalao dia voalaza Fandresena. Misy be ny fahafahana mba handresy avo mampientam-po izany valisoa amin'ny lalao slot. Manasongadina ny mpandray anjara rehetra avy amin'ny Comics, samy manana whopping habetsahan'ny payouts mba handro ny mpilalao amin'ny.
Ny lehilahy misaron-tava dia ny bibidia ao amin'ny slot ary dia soloina hafa litera vao vita mba handresena ao tsikombakomba. Raha Batman dia manampy amin'ny fanatanterahana ny tsikombakomba, dia ny Fandresena dia avo roa heny ao amin'ny base lalao. Ny aelezo amin'ny lafiny iray hafa, dia mifanitsy amin'ny Kaomisera Gordon sy famantarana izany dia hamoaka ny Re-spins manodidina ary rehefa mitranga manodidina ity, Fandresena rehetra atao avo roa heny.
Inona no mbola miandry? Rush ny Coinfalls Casino ary miezaka ny vintana amin'ny reels ity lehilahy manam-pahaizana slot ka jereo izay Batman no ho anao. Ny Dark Knight dia manana be dia be ny valisoa miandry anareo; Ataovy azo antoka ianao mahazo ny tanana taminy.